Otú nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone
> Resource> iTunes> Nyefee Video / Audio Pọdkastị si iTunes ka iPhone (iPhone 5s gụnyere)
Enwere m ọtụtụ ihe pọdkastị ebudatara m iTunes n'ọbá akwụkwọ na-amasị nyefee ha ka ha m iPhone. Bụ nke a kwe omume? M ejikọrọ m iPhone na iTunes, na họrọ "mmekọrịta Pọdkastị". Otú ọ dị, ọ dịghị ihe mere. M ka na-apụghị ịchọta Pọdkastị synced m iPhone. Ọ dịghị njehie ozi na ịdọ aka ná ntị!
N'ozuzu-ekwu okwu, na-eme ka ihe onye ọrụ n'elu mere, ị nwere ike nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile ikpe. Na apple.com, ị pụkwara inwe Ama na ụfọdụ video Pọdkastị nwere ike na-egwuri ọma na iTunes, ma ike ga-agafere iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka maka playback n'ihi format incompatibility nke. Na nke a, iji hụ na ị ga-agafeta Pọdkastị si iTunes ka iPhone ịga nke ọma, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ha abụọ ka ị ga-esi video na ọdịyo Pọdkastị si iTunes ka iPhone mfe na-enweghị usoro nke ewute!
Download Wondershare TunesGo nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone!
Download nri version na wụnye ya na kọmputa gị. Na-esonụ, anyị ga-elekwasị anya na otú nyefee video na ọdịyo Pọdkastị si iTunes ka iPhone on Windows PC na Wondershare TunesGo (Windows). N'ihi na Mac ọrụ, biko gbalịa na Mac version. Nke a software dị mfe iji. Na oge ị na ẹkedori ya, ị ga-ama ka esi eji ya.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na PC site eriri USB
Jikọọ gị iPhone na gị Windows PC site na iPhone eriri USB. Ẹkedori Wondershare TunesGo (Windows) na ọ ga-amata gị iPhone. Na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na na Wondershare TunesGo isi window, gị iPhone Ama na-egosipụta. Wondershare TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọ bụla iPhone nke na-arụ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9.
Nzọụkwụ 2. Nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone
Ke akpan window, pịa Media na n'aka ekpe. Site ọhụrụ mkparịta ụka window, ị pụrụ ịhụ "Pọdkastị" n'elu. Pịa "Pọdkastị" ịhụ niile video na ọdịyo Pọdkastị na gị iPhone. Lee "Tinye" n'elu nke mpio? Pịa ya ma họrọ "Tinye File" ke ndọpụta ndepụta.
Ọhụrụ mmapụta, pịa "Music" na-ekpe> abụọ-pịa "iTunes" na nri> abụọ-pịa "iTunes Media"> abụọ-pịa "Pọdkastị"> họrọ chọrọ video ma ọ bụ ọdịyo Pọdkastị na pịa "Open ". Na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na Pọdkastị si iTunes na-agafere gị iPhone. Ọ bụrụ na ndị a Pọdkastị na ị na-ebufe na-adịghị iPhone dakọtara omume, a ozugbo ga-apụta, na-arịọ gị ka ị na tọghata ha. Dị pịa tọghata iji tọghata Pọdkastị ka iPhone n'ụzọ zuru ezu na-akwado formats maka ebufe.
Lee otú nyefee Pọdkastị site na iTunes Media nchekwa iPhone
Gbalịa Wondershare TunesGo Nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone!